नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो कारोबार रकम ११ अर्वमाथि - UjyaloNepal
नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो कारोबार रकम ११ अर्वमाथि
आज कारोबार भएका धेरैजसो कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि नेप्से पनि फेरी २८ सय माथि पुगेको छ ।
काठमाण्डौ । धेरैको अनुमान थियो,आज शेयर बजारमा पहिरो जाने छ । त्यो पहिलो सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक जाने धेरैको अनुमान थियो तर पहिलो सकारात्मक गयो ।यस विचमा नेपालमा राजनीतिक ठुला ठुला परिर्वतन भएका छन । जसले गर्दा शेयर बजारमा प्रभाव पार्छ भन्नु सामान्य हो तर
राजनीतिलाई शेयर बजारले बाइकट गर्न थालेको छ ।
साताको पहिलो दिने आइतबार नेप्सेमा देखिएको रौनकले सोहि कुरा बताउछ । आज कारोबार भएका धेरैजसो कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि नेप्से पनि फेरी २८ सय माथि पुगेको छ ।
आज नेप्से करिव ३३ अंकले बृद्धिभएको छ । त्यस्तै कारोबार भएका मध्य १ सय २३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने जसमा करिव एक दर्जन भन्दा धेरैको सर्किट लेवलमा कारोबार भएको छ भने ५५ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य भने घटेको छ । त्यस्तै ५ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य यथावत रहेको छ ।
नेपाल पुनरविमा कम्पनीको शेयरको सबैभन्दा धेरेका कारोबार हुँदा समग्र कारोबार रकम भने ११ अर्व ४२ करोड माथि पुगेको छ । यो अहिले सम्मकै दोस्रो ठुलो कारोबार हो । यसअघि १२ अर्व माथिको कारोवार समेत भइसकेको छ ।
होटल,माइक्रोफाइनान्स र निर्जिवन विमाका बाहेक अरु सबै उपसूचकहरु आज चम्कीए । आज फाइनान्स र विकास बैकका लगानीकर्ता मालामाल भए ।
क्रियाशिल समाबेशी युवा क्लबको अध्यक्षमा दुर्गा खड्का चयन
यही साता आउँदैछ नयाँ आईपीओ, कति दिने आबेदन?
आजदेखि खुल्दै तेह्रथुम पावरको आइपीओ कति दिने आवेदन ?
शेयर बजारका लगानि कर्ताहरुका लागी जरुरि सुचना